Hubinta Asalka Tabaruca | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka amniga ardayda; baaritaanka asalka dambiyada; iskaa wax u qabso
Waad ku mahadsantahay xiisaha aad u leedahay inaad tabaruc ugu noqoto dugsiyadeena. Waanu qadarinaynaa waqtigaaga iyo kartidaada.
Si loo hubiyo nabadgelyada ardaydeena, waxaan u baahanahay in la baaro asalka dambiyada waxyaabaha soo socda:
Tabaruce kasta oo ardayda ku weheliya xerada dibaddeeda (ie, silsiladaha safarada dibadda).
Tabaruce kasta oo mas'uul ka ah la shaqaynta ardayda xerada, laakiin aan ku hoos jirin kormeerka macallin shati haysta.
Halkan guji si aad u bilowdo baaritaanka asalka!
Haddii shaki ku jiro, buuxi baaritaanka asalka ah (marka laga reebo kuwa hadda shaqeeya)
Tabaruceyaashu waxay u baahan yihiin oo keliya inay sameeyaan baaritaanka asalka hal jeer natiijooyinkuna waxay raaci doonaan dhammaan carruurtaada illaa xirfaddooda waxbarasho ee Dugsiyada Minnetonka. Marka, marka lagaa ansixiyo nidaamkayaga baaritaanka asalka tabaruce, waxaa laguu oggolaan doonaa inaad tabarucdo mustaqbalka adigoon howsha mar labaad u marin. Si aad wax uga weydiiso haddii aad horey u heshay cadeyn asalka tabaruce oo ku saabsan faylka, fadlan la xiriir kaaliyaha xafiiska weyn ee iskuulka ilmahaaga ama Kheyraadka Aadanaha 952-401-5014.
Foomka baaritaanka asalka dambiyada wuxuu kaaga baahan yahay inaad bixiso rukhsad baaritaanno kala duwan oo asalka dambiyada ah:
Taariikhda Dambiga Galmada Qaranka: Waxay bixisaa baaritaanka diiwaanka dembiilaha galmada ee dhammaan 50ka gobol oo lagu daray Degmada Columbia.
SuperSearch Criminal: Baadhis dambi ah oo loogu talagalay 47 gobol oo lagu daray Degmada Columbia.
Raadinta Lambarka Sooshal Sakuuritiga: Waxay bixisaa magaca, magacyada, 10 sano cinwaanka taariikhda, iyo dhammaan nambarada sooshiyal sekuyuuriti ee la xiriira qofka. Wuxuu xaqiijinayaa in lambarka sooshal sekuuritiga uu ansax yahay, wuxuu bixinayaa sanadka soo saarista iyo gobolka la soo saaray.
Wax lacag ah lagaaama siinayo baaritaanka asalka; waxaa lagu sameeyaa kharashka degmada xogtana waxaa laga dhigayaa mid qarsoodi ah. Xubnaha shaqaalaha ee Shaqaalaha waxay dib u eegi doonaan natiijooyinka baaritaan kasta oo taariikh ah. Haddii ay jiraan wax walaac ah oo ku saabsan natiijooyinka baaritaanka asalka, Shaqaalaha Dadweynaha ayaa si toos ah kula soo xiriiri doona 24-48 saacadood ka dib marka la helo natiijooyinka. Haddii aan lagula soo xiriirin 48 saacadood gudahood ka dib markaad buuxiso foomka baaritaanka asalka, waad iska cadahay inaad tabaruc tahay. Foomka khadka tooska ah waxaa ku jira ikhtiyaari tabaruceyaasha ay ku codsadaan nuqul ka mid ah warbixintooda.
Waad ku mahadsan tihiin wada shaqeyntiina markii aan sii wadno inaan ilaalino jawi waxbarasho oo ammaan iyo ammaan u leh ardaydeena.
Fiiro gaar ah: Shaqaalaha hada ka shaqeeya Dugsiyada Minnetonka, horeyba waa laguu fasaxay inaad ka shaqeyso Degmada, marka uma baahnid inaad dhameystirto baaritaanka asalka tabaruca.